वाल कृष्ण ढुंगेललाई पृथीछक बुढा मगरको खुल्ला पत्र – मुलधार न्युज
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > वाल कृष्ण ढुंगेललाई पृथीछक बुढा मगरको खुल्ला पत्र
१७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १६:४४
प्रिय कमरेड बाल कृष्ण ढुंगेल । तपाईंलाई मैले शुरुमै कमरेड शब्दले सम्बोधन गरें । म तपाईंको कमरेड हुँ वा होइन ? म आफैलाई थाहा छैन । नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई मात्रै कमरेड भनिने चलन छ । खासमा फ्रेँच भाषामा भनिने कमरेडको अर्थ हुन्छ साथी । म तपाईंको साथी हुँ वा होइन ? त्यो पनि मलाई थाहा छैन । र म क
म्युनिस्ट हुँ वा होइन ?त्यो पनि मलाई थाहा छैन । मलाई यति थाहा छ, म केवल मान्छे हुँ । म मान्छे भएरै बिषय उपर गम्भीर चिन्तन गर्न मन पराउँछु । मलाई थाहा छ, तपाईं अशल कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले मैले तपाईलाई नेपालीहरुको बुझाई अनुरुप साथी होइन, कमरेड शब्दले सम्बोधन गरिरहेको छु ।